"IREZINE": SHARAXAADDA DHIRTA, NOOCYADA, SAWIRADA IYO DARYEELKA GURIGA, BEERASHADA - SOOSAARKA DALAGGA
Ubaxa gudaha ee "Irezine": sawir iyo sharaxaad
Irezine - Warshad dilis ah oo caan ka ah guryaha oo ay sabab u tahay midabka aan caadiga ahayn ee caleemaha casaanka ah ee caleemaha.
Uma baahnid abuurista xaalado gaar ah oo gaar ah, waana la kori karaa xitaa growers growers.
Xaaladaha qolka iridiny Blooms dhif ah.
Waxaa la aaminsan yahay in warshadani ay ka heshay magaceeda erayada Giriigga "eiros" ama "eirion", taas oo macneheedu yahay "dhogor". Xaqiiqdii, ubaxyada iyo miraha waxaa lagu daboolay cufan.
Irezine waxaa iska leh qoyska amaranthmeeshiisii asalka - Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Galapagos, Australia, Antilles. Kuwani waa dhirta yaryar, geedo, caleemo wareeg ah oo leh caarad jilicsan ama jeexan. Ubax yaryar ayaa isugu soo ururiya inflorescences qaab dhegta, miro yaryar - sanduuqa.
Waqti hore ka hor ubax ahaa waa caan in sirqoollada gaarka ah iyo jardiinooyinka jiilaalka - waxaa lagu beeray sariirood ubax waaweyn, wadooyinka ama dhagaxyo dhagax ah. Laakiin ka dibna fashion ayaa isbeddelay, iyo dhirta lumay ay caan. Hadda beeralayda ubaxa waxay dib u furayaan iridine iyaga, iyaga oo isticmaalaya ubaxyada iyo walxaha lagu qurxiyo casaan.
Views iyo sawirro
Dabeecadda waxaa laga heli karaa agagaarka 80 noocyo irezine, laakiin guriga oo kaliya laba ayaa helay sumcadooda:
Irezine Herbst - wuxuu ku koraa kaymaha ee kuleylka ah ee kubadda cagta ee Brazil, waa sanado badan ubax leh afkoda casaan. Caleemaha waa wareegsan yihiin, kala qaybsanaan sare, guduud mugdi leh xididdada cas ee casaanka ah. Taas bedelkeeda, waxa loo qaybiyaa laba qaybood - oo leh caleemo cagaaran iyo garaan dahab ah, iyo sidoo kale caleemaha burgundy iyo glaling surface. Waxaa loo isticmaalaa beerista guriga. Sawirada hoose ayaa muujinaya Irezine Herbst:
Irezine Linden - tan loo yaqaan tan 1737. Meeshiisii habitat waa ciidda roobka ee Ecuador. Waa warshad leh dherer ah 50-60 cm oo leh asliga ah midab madow. Caleemaha ubaxa waa oval, illaa 6 cm dheer, midab madow mugdi ah oo leh xididada casaanka leh. Marka la gooyo geedka ayaa bilaabmaa inuu si firfircoon u koro dhinaca, kaas oo u oggolaanaya mudo gaaban si loo abuuro dhul soo degitaan. Waxaa isticmaalay marka la beero beerta iyo beeraha. Maxay "Iresina Linden" u egtahay in lagu arki karo sawirka hoose:
Ha ka baqin inaad hesho guriga irezine - iyada uma baahna Xaalado gaar ah, waxay si fiican u koraan hawada gudaha ee qallalan iyo laan firfircoon.
Markaad dooranaysid ubax dukaanka, waa inaad si taxadar leh u eegtaa dhammaan caleemaha labada dhinac isla markaana hubi in aysan jirin dulin.
Irezine waa kuleylka kulaylka-kulaala, iyo haddii iibka la sameeyo xilliga qaboobaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso badbaadinta hawada qabow.
Sidaa darted, dheriga ayaa lagu duuduubay dhowr lakab oo warqad qaro weyn ah, ama bacda thermo gaar ah ayaa loo isticmaalaa.
Ka dib markaad guriga timaaddo, dhirta waxaa la dhigayaa daaqad leh nalal wanaagsan; waraabinta waa mid aad iyo aad u badan. Ka dib 1-2 toddobaad, ka dib dhammaadka mudada la qabsashada, iridiin si taxaddar leh ayaa loo dhex geliyaa dheri cusub, waxoogaa ka weyn kii hore, oo badalashada buuxda ee ciidda. Caleemaha ubaxa waa dhuuban yihiin, sidaa daraadeed waa wax aan suura gal ahayn in la jeexo ama la burburiyo dhulka waayeelka ah.
Irezine sii kordhayajiidashada. Si loo xaqiijiyo daacadnimo waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u xoqdo dushooda caleemaha. Waa suurtagal in la soo saaro manjooyin duugmo ah horraantii Febraayo, oo ka tagaya "maro", oo jaray saqafyada loo isticmaalo sida gooyn. Tallaabada noocan oo kale ah waxay ubaxeysaa ubaxa koritaanka firfircoon ee guga.
Caawin! Haddii, ka dib markii manjooyin, dhirta mar labaad si xoog leh u fidiyo dhamaadka xilliga xagaaga, waxaa la goyn karaa mar kale, laakiin wax badan - waxa ugu muhiimsan ee kiiskan waa in la siiyo taajka qaab.
Inta u dhaxaysa laga bilaabo bilawga guga ilaa dhamaadka xilliga dayrta waxay soo saaraan waraabin leh qadar badan oo biyo ah oo jilicsan.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee nidaamka waa qalajinta qaybta sare ee ciidda, laakiin ugu yaraan 1 jeer 2 maalmood.
Inta lagu jiro kuleyl aad u kulul ubaxa waxaa lagu waraabin karaa wakhti go'an, waxaa muhiim ah in lagu daboolo dheriga ay ku jiraan cellophane sidaa daraadeed biyaha tuubada kuma dhicin dhulka.
Xilliga jiilaalka, qadarka qoyaanka waa la yareeyaa, lakiin uma baahna in loo oggolaado in la qalajiyo. Haddii heerkulka qolka hoos u dhacdo ka hooseeya +16 digrii, ka dibna ilaalinta nidaamka xididka ee hypothermia, waraabinta waa in si weyn loo yareeyaa, ama si ku meel gaar ah u joojiyaan wadarta.
Ubaxu wuu ka soo horjeedaa si liidata oo aan lahayn qoyaanka ciidda, laakiin waa inaan lagu shubin ciidda - suuska xididka ayaa laga yaabaa inuu bilaabo.
Dhulka iyo dhulka
Dhirta wuu jecel yahay ciidda dhexdhexaad ah ama wax yar oo ka kooban acidic. Marka koraan shuruudaha qolka waxay ku haboonaan doonaan dukaanka kasta. Waxaad sidoo kale naftaada ka dhigi kartaa substrate adiga oo isku daraya 1 qeyb oo ah beerta caleen iyo dhul caleen, ciid aan qalafsanayn iyo peat. Qeybta hoose ee weelka waa in lagu shubaa lakabka dheecaanka.
Irezine ma aha mid u-adkaysi u, oo sidaas daraaddeed, marka koraan cirka furan, waxay u baahan tahay qodid iyo jiilaalka qolka diiran ee xiran. Guga, ubaxa waxaa lagu beeray mar kale sariirta ubax.
Bisilis waxaa la sameeyaa markii la buuxiyo xididada weel dabacsan, ugu yaraan hal mar 2-3kii sanoba mar. Dhar cusub waa in la soo xulaa dheecaan godad, hoose ee lakabka drainage ama khudrada leben.
DAREEN! Marka la beddelo beddel dhamaystiran ee ciidda looma baahna - waa ku filan inaad ku wareejiso kubbadda adduunka ah weel cusub oo buuxi hulalka dhul cusub.
Kordhinta abuurka guriga
Koritaanka iridiin laga bilaabo abuurka ma aha mid aad loo jecel yahay, habka ugu fudud ee loo helo warshad laga soo jarayo.
Seeds ayaa la helayaa ee dukaamada khaaska ah laguna beeray weel, kaas oo markaa lagu daboolay galaas ama filim.
Wakhti ahaan, waxaad u baahan tahay inaad furto dhulka, qoyso ciidda oo samee hawada.
Ka dib dhac sprouts, muraayad ama filim ayaa laga saaraa, weelkuna wuxuu u eg yahay meel diirran oo dhalaalaya. Sida ugu dhakhsaha badan ugu yaraan 3 caleemo ayaa la furay on biqil, waxaa lagu dhigaa dheriga shakhsi, ka dib markii daryeelka waxaa loo fuliyaa sida geedka qaangaar ah.
Waayo taranta adoo isticmaalaya gooynta Maarso ilaa Juun gooyay qaybta sare ee biqil, oo ay ku jiraan ugu yaraan 3-4 caleemo. Kadibna wuxuu ku ridaa weel qoyan oo qoyan, kaas oo lagu hayaa heerkul ah + 16-20 digrii ama rujiyay galaas biyo ah.
Roots ayaa muuqda 8-10 maalmood gudahood. Taas ka dib, goynta kasta waxaa loo wareejiyaa dherad shakhsi ah oo qiyaasto 7 sentimitir, heerkulka qolka + 20 digrii. Inta lagu jiro muddadan, waxaad horay u bilaabi kartaa qaabeynta muuqaalka geedka mustaqbalka, bar bardhaca dushooda.
Irezine ma ahan mid dabacsan heerkulka, waxayna ku jiri kartaa qolal leh heerkulka hawada laga bilaabo 16 ilaa 25 digrii. Xilliga jiilaalka, marka uu hoos u dhaco +12 digrii dayrta caleen, iyo haddii xaalada aan la saxin, waxay dhici doontaa burburay ubax
Caawin! Xilliga xagaaga, gaar ahaan kulul (heerkulka ka sarreeya 28 digrii), waxa lagu talinayaa in la kordhiyo qiyaasta biyaha, oo buufin caleemaha.
Haddii kale, waxaa laga yaabaa in ay dhacdo luminta turgor.
Waayo kobaca firfircoonida iyo horumarinta geedka wuxuu u baahan yahay qorax cad. Dheriga ku yaal aqalka waxaa ugu fiican in la dhigo koonfurta, galbeed ama daaqada bari. Inay toosiyaan ubaxyo si tartiib ah u baro si looga fogaado gubashada caleemaha, duhurkii - budada.
Iyadoo la'aanta iftiinka, caaggu waa la jiidayaa dhinaca, luminta caleemaha iyo iftiinka midabka. Haddii la isticmaalo iftiin macmal ah, muddada ay soo-gaadhistu waa inay ahaataa ugu yaraan 14 saacadood maalintii.
Dhirta ma heysto Guryaha muhiimka ah, casiirka iyo qeybaha ubaxa ma aha sun ah.
Irezine waxaa laga yaabaa in la marsiiyo duubista caarada caarada, cirridka iyo aphids.
Saxiixa guuldarada Caarada caarada ayaa ah muuqaalka shabakada webka.
Si loola dagaalamo iyada oo aad u baahan tahay inaad si tartiib ah u tirtirto dhamaan caleemaha oo leh jilicsan jilicsan oo biyo leh saabuun.
Haddii dhirbaaxada dhirta ay horeyba u xoogan tahay, oo ay bilaabtay in ay lumiso caleemo, ka dib markii la dhaqo waa lagama maarmaan buufin cayayaanka.
Iyadoo jabinta By whitefly, tiro badan oo duqsigu cad muuqan ku dhow dhirta, taas oo bilaabi in ay si firfircoon u guurto marka caleemaha la ruxay.
La dagaallan cayayaankan way adag tahay xaqiiqda ah in caddaanku ay si joogta ah uga duusho hal warshad kale.
Burburinta waxaa la sameeyey kaliya joogto ah ku buufin 4-7 maalmood oo kasta, oo ay ku jiraan dhirta caafimaad leh.
Aad bay muhiim u tahay in lagu daboolo dabaqyada gaarka ah ee duullimaadka.
Marka la isku qaadsiiyo ubax leh aphids, caleemuhu waxay ku daboolaan dheecaanka dhegaha cad, dhejinta iyo hoos u dhac.
Si loola dagaallamo cayayaanka ayaa isticmaalay kiimikooyin gaar ah.
Sidoo kale dhirta dilka ah waxaa ka mid ah: Alternantera, Peperomiya "Lilian", Banana.
Irezine - Warshad asalka leh caleemaha burgundy. Waayo sii koraya qolalka kala duwan ayaa lagu soo xulay caleemaha wareegsan, wadada - oo leh oval. Tani waa warshad kuleyl ah, sidaas darteedna waxay u baahan tahay iftiin qorrax leh iyo waraabin badan. Kala saarida waxaa lagu sameeyaa gooyn.